यी हुन् शेरबहादुर देउवाका ‘भाग्य’ लुट्न सक्ने ४ संकट ! | suryakhabar.com
Home राजनीति यी हुन् शेरबहादुर देउवाका ‘भाग्य’ लुट्न सक्ने ४ संकट !
यी हुन् शेरबहादुर देउवाका ‘भाग्य’ लुट्न सक्ने ४ संकट !
on: १३ जेष्ठ २०७४, शनिबार ०९:५९ In: राजनीतिTags: यी हुन् शेरबहादुर देउवाका ‘भाग्य’ लुट्न सक्ने ४ संकट !No Comments
काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि सबै दलहरुलाई आह्वान गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसबेला सहमतीय सरकार गठनका लागि कसरत गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले सात दिनभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वान गरिसकेकी छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि बाटो समेत खुलिसकेको छ । दलीय सहमतिअनुसार योपटक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दैछ । तर पछिल्ला दिन सरकार निर्माणको तयारीमा रहेका सभापति देउवाका अघि एकपछि अर्का चुनौतीहरु देखिइरहेका छन् ।
वुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएको २ दिनपछि लगत्तै मुलुकको राजनीतिक परिदृष्यमा एकपछि अर्को घटनाहरु घटिरहेका छन् । यसले तोकिएको जेठ ३१ गतेको निर्वाचन र सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई कहाँ पुर्याउला ? भन्ने कौतुहलता समेत बढाएको छ । त्यसैले पनि नयाँ सरकार निर्माणको तयारीमा रहेका सभापति देउवा राजनीतिक चक्रव्युहमा फस्ने खतरा समेत टड्कारो रुपमा देखिन्छ ।
सरकारले केही दिनअघि २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मुलुक चुनावी प्रक्रियामै रहेका बेला सरकारले चालेको यो कदम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन र सरकार निर्माणको प्रक्रियामा समेत प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई सिधै प्रभाव पार्ने नदेखिएपनि निर्वाचनलाई भने प्रभाव पार्ने देखिन्छ । किनभने २२ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ३१ मै गर्ने सरकारको योजना अब तुहिएको छ ।
त्यसैले अब निर्वाचनको मिति पर सारेर २२ वटै स्थानीय तहलाई समेटेर निर्वाचन गर्ने कि त्यसलाई छाडेर निर्वाचन गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ । दोश्रो, चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिएर प्रधानमन्त्री हुन थालेका सभापति देउवालाई यो निकै ठूलो चूनौती समेत हो ।
संघीय गठबन्धनको आन्दोलन
मधेस केन्द्रीत दलहरुको छाता संगठन संघीय गठबन्धनले दोश्रो चरणको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीसहितको सो गठबन्धनले चुनावी प्रक्रिया सुरु हुने दिन आम हड्ताल लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुले निर्वाचननै हुने हो कि होइन भन्ने आशंकाहरु जन्माएको छ ।
यही अन्योलताका बीचमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका सभापति देउवालाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको देखिन्छ, यो देउवाका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो ।
पार्टीको आन्तरिक समीकरण मिलाउने चुनौती
नेपाली कांग्रेस आफैमा विशाल आन्तारिक संगठन भएको पार्टी हो । सो पार्टीमा गुटगत राजनीति हुनु स्वभाविक कुरा हुँदै आएको छ । सभापति देउवाको एउटा धार, रामचन्द्र पौडेलको अर्को धार र कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको पृथक धार कांग्रेसभित्र मौलाएका समुहगत गुटहरु हुन् ।
यी सबै समुहबाट सन्तुलित ढंगले नेतृत्वलाई समेटेर सरकारमा सहभागी हुनु देउवाको लागि अर्को ठूलो चुनौती देखिन्छ । त्यसैले यो विषय पनि देउवाका लागि ठूलो चूनौतीको विषय हुनसक्छ ।
एमालेको नयाँ प्रस्ताव, ‘राजनीतिक बल्छी’ हुनसक्छ !
शुक्रबार संसद भवनबाट बाहिरिदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अप्रत्यक्ष रुपमा एउटा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले राखेको यो प्रस्तावलाई नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा अप्रत्यासित प्रस्ताव भनेर संकेत गरिदैछ । सरकारमा सहभगी हुने मामलामा केही वर्ष चुप लागेर बस्ने निर्णय गरेका अध्यक्ष ओलीले मुखै खोलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको वकालत गरेका छन् ।
उनको यो प्रस्तावले कांग्रेस–माओवादीकै नेताहरु राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वमा जान सक्ने संकेत दिएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा ‘राजनीतिक बल्छी’को रुपमा समेत यो प्रस्तावलाई हेरिएको छ । यो विषयमा सभापति देउवा चनाखो नभए आएको अवसर पनि गुम्न सक्ने धेरैको आंकलन छ । किनभने दोश्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित हुने गरी सर्वोच्चले दिएको आदेश र मधेस केन्द्रीत दलहरुले गरेको आन्दोलनको घोषणाले यसबेला निकै ठूलो अर्थ राख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउन थालेका छन् । यसमा सरकारको नेतृत्वमा जान लागेका सभापति देउवाले निकै ठूलो सचेतता अप्नाउन जरुरी रहेको उनीहरुको ठहर छ ।
Tags: यी हुन् शेरबहादुर देउवाका ‘भाग्य’ लुट्न सक्ने ४ संकट !
प्रधानमन्त्री बन्नै लागेका काँग्रेस सभापति देउवालाई, पौडेललाई प्रम बनाउन आग्रह गर्दै बैंकर कुँवरले यस्तो लेखे खुल्ला पत्र
लुक्लामा बिमान दुर्घटनामा चालक गम्भिर घाईते राईको मृत्यु, प्रतिकुल मौसमका कारण दुईलाई काठमाण्डौ ल्याउन सकिएन
१३ जेष्ठ २०७४, शनिबार ०९:५९